माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ कात्तिक १५ देखि, कति गर्ने आवेदन ? « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
माथिल्लो तामाकोशीको आइपीओ कात्तिक १५ देखि, कति गर्ने आवेदन ?
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोशी हाइड्रोपावरले कात्तिक १५ गतेदेखि आइपीओ बिक्री खुला गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरमा १ करोड ५८ लाख ८५ हजार कित्ता आइपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । यो आइपीओमा न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम १ हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कात्तिक १९ गतेसम्म भर्ने म्याद राखिएको छ । यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा आवेदन नपरेमा भने मंसिर १४ गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ ।
आईपिओ बिक्री गर्न सेयर विक्री प्रबन्धकको काम नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटलले गर्ने भएका छन् । यस आईपिओमा लगानीकर्ताले न्यूनतम ५० कित्तादेखि अधिकतम एक हजार कित्तासम्म आवेदन गर्न पाइने व्यवस्था रहेको छ । आईपिओमा कात्तिक १९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आस्वा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि आवेदन दिन सकिनेछ । मेरो सेयर प्रयोगकर्ताले अनलाइनबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् ।
यसअघि माथिल्लो तामाकोशीले साउन १६ गतेदेखि भदौ २१ गतेसम्म दोलखाका स्थानीयबासीका लागि चुक्ता पुँजीको १० प्रतिशत अर्थात १ करोड ५ लाख ९० हजार कित्ता आइपीओ निष्काशन गरिसकेको छ । यस शेयरको बाँडफाँड पश्चात दोस्रो चरणमा सर्वसाधारणका लागि शेयर निष्काशन गर्न लागेको हो ।
दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका १ लामाबगरमा निर्माण भइरहेको ४ सय ५६ मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको अनुमानित लागत भने दोब्बर पुग्ने भएको छ । आयोजनाले २०७४ फागुनमा ३ करोड ६० लाख ६ हजार कित्ता सेयर बिमा संस्थानका कर्मचारी, विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी, नागरिक लगानी कोष र सञ्चय कोषमा रकम जम्मा गर्ने कर्मचारीका लागि यसअघि नै निष्काशन गरिसकेको छ ।
यस आयोजनाले दोस्रो चरणमा रोल्वाङ खोलाबाट १६७ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ । माथिल्लो तामाकोशीको विद्युत गृहबाट निस्कने पानीबाट १०१ मेगावाटको तामाकोशी पाँचौ निमार्ण कार्य पनि अघि बढिसकेको कम्पनीको भनाई छ ।
२०७५ असोज २९ गते प्रकाशित
भृकुटीमण्डपमा सुरु भयो जुत्ताचप्पल मेला, ६० प्रतिशतसम्म छुट दिइने
काठमाडौं । नेपाली जुत्ताचप्पल उद्योगी समुहको आयोजनामा राजधानीको भृकुटीमण्डप प्रवेशद्वारमा काठमाडौं फुटवेयर विजनेस एक्स्पो बुधबारदेखि
कुलेखानी तेस्रो र माथिल्लो त्रिसूली ३ ए निर्माणको अन्तिम चरणमा
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली थ्रि ए र १४
मलेसियाबाट मेगा रेमीट सेवा
काठमाडौँ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेड र मलेसियाको प्लासिड एक्सप्रेस कम्पनीबीच रेमीट्यान्स कारोबारसम्बन्धी सम्झौता भएको
रा.वा बैकद्धारा मिनभवनमा जेष्ठ नागरिकको खाता खोल्ने कार्यक्रम संचालन
काठमाडौं । समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता खोलौ बैंक खाता अभियान–२०७६ू अन्तर्गत राष्ट्रिय
पोखराको लेकसाइडमा औरा बार एण्ड लाउन्ज
भ्रमण वर्षको पहिलो दिन राष्ट्रिय झण्डा फहराउँदै ‘गाँजा हिल’ नयाँ…
उपत्यकाको खानेपानी समस्या हल गर्न योजना बनाएर अघि बढेका छौं…
सेञ्चुरी बैंकको समृद्धिसँग जोडौं नाताः सबै नेपालीको बैंक खाता
काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री बिना मगरले काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानीको समस्या हल गर्न योजनाबद्ध ढंगले लागिरहेको